'म्यारिड लाइफ' लाई कसरी 'ह्याप्पी' बनाउने ? - Kendrabindu Nepal Online News
‘म्यारिड लाइफ’ लाई कसरी ‘ह्याप्पी’ बनाउने ?
प्रेममा पर्नु कुनै ठूलो कुरा होइन तर दुवैबीचको प्रेमलाई जोगाइ राख्नु चै ठूलो कुरा हो । सम्बन्धमा एकअर्काप्रति प्रेम हुनु धेरै जरुरी हुन्छ । जानेर वा अन्जानमा धेरै गल्ती गर्न सकिन्छ । तर गल्तीलाई सच्याउँदै, एकअर्कालाई माफी दिँदै, एकअर्कालाई सहयोग गर्दै अगाडि बढ्न नै समझदारी हुन्छ र यो नै एक राम्रो सम्बन्ध हो ।
सानो कुराले खुशी दिनु, सानो कुराले दुखी बनाउन सक्छ । त्यसैले सानो कुराले पनि सम्बन्धमा ठूलो महत्व राख्छ । समय मिल्नासाथ दुवैले एकअर्कासँग कुरा गरिहाल्नुपर्छ । यसले सम्बन्धमा ताजगी ल्याउँछ । सम्बन्धमा रिफ्रेसमेन्ट हुनु एकदमै जरुरी हुन्छ ।
बिहे भइसकेपछि दम्पत्ति एकअर्कालाई समय दिनु वा डेट जानु महत्व मान्दैनन् । तर, सहि होइन । एक अर्काबीचको सम्बन्धलाई थप मजबुत र थप कसिलो बनाउन मौका मिल्ने वित्तिकै प्रेम व्यक्त गरिहाल्नुपर्छ । ‘आई लभ यू’ यो तीन जादुयी शब्दले नै सम्बन्धमा थप पे्रम भरिदिन्छ । श्रीमान–श्रीमती बन्नुपुर्व राम्रो साथी बन्नु जरुरी हुन्छ । एक अर्कालाई बेस्ट फ्रेन्ड बनाउँदा बैबाहिक जीवनबाट दोब्बर सन्तुष्ट मिल्छ ।
लङ्ग ड्राइभमा जान कसलाई मन नलाग्ला ? जब समय मिल्छ लङ्ग ड्राइभमा निस्कन सकिन्छ । बिहान वाकमा जाने र साँझ डिनर पनि सँगै गर्ने । यसले सम्बन्ध रिफ्रेस त हुन्छ नै सम्बन्ध पनि बलियो हुन्छ ।
एकले अर्काको मनपर्ने मननपर्ने कुराको ख्याल गर्नुपर्छ । सँगै खाना बनाउने साथै अन्य काममा पनि सहयोग गर्नुपर्छ । एकले अर्काको कुरा सुन्ने, बुझ्ने गर्नुपर्छ । यसले दुवैबीच प्रेम बढ्नुको साथै सम्बन्धमा खुशीयाली छाउँछ ।
कुनै पनि सम्बन्धमा आफ्नो पाटर्नरलाई प्रेम दर्शाउनु जरुरी हुन्छ । कहिलेकाही सरप्राइज दिने, बाहिर घुमाउन लैजाने, गिफ्ट दिने । जसले सम्बन्ध मजबुत त हुन्छ नै हरेक क्षेत्रमा सफलता पनि मिल्छ ।